Inona no hatao aorian'ny fametrahana Deepin OS 15.6 | Avy amin'ny Linux
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Deepin OS 15.6
Rehefa avy nahitsy fametrahana ny Deepin 15.6 Misy lesoka vitsivitsy nisedra mihoatra ny iray ary mora ny famahana azy. Ankoatr'izay dia azo inoana fa mitaky fanovana fanampiny ianao.
Izany no antony hizara aminao zavatra tsotra azonao atao izahay aorian'ny fametrahana ny Deepin OS amin'ny solosain'izy ireo.
1 Vaovao farany ny fonosana sy ny rindranasa amin'ny kinova farany miorina.
2 Vahaolana amin'ny lesoka GPG: http://repository.spotify.com
3 Vahaolana amin'ny lesoka [drm: drm_atomic_helper_commit_cleanup_done]
4 Fampiharana atoro anao
Vaovao farany ny fonosana sy ny rindranasa amin'ny kinova farany miorina.
Na dia vao haingana aza ny kinova 15.6 an'ny Deepin, lfonosana sy rindranasa mazàna no havaozina ka na inona na inona apetrantsika fotsiny dia tena ilaina izany.
Tsy maintsy manokatra terminal isika ary manoratra ireto baiko manaraka ireto:
Vita izany sahady hanavao ny fonosana izahay. Mety misy ihany koa ny mety hitranga rehefa manao an'ity ianao dia hahazo ity lesoka manaraka ity.
W: GPG error: http://repository.spotify.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY EFDC8610341D9410
W: The repository 'http://repository.spotify.com stable InRelease' is not signed.
Vahaolana amin'ny lesoka GPG: http://repository.spotify.com
EMatetika io lesoka io mivoaka ianao satria ny lakilem-bahoaka avy amin'ny tahiry Spotify dia tsy nampidirina am-pahombiazana.
Ho an'ity manana vahaolana roa azo atao isika ny iray amin'izy ireo dia ny manafatra indray ny lakilem-bahoaka ary ny iray kosa dia mamafa ny trano fitehirizana.
Amin'ny ankapobeny ity farany no safidy tsara indrindra, satria ankehitriny ny mpanjifa Spotify ho an'ny Linux dia hita amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux.
Izany dia efa miankina amin'ny safidin'ny tsirairay ary samy mizara ny fomba roa izahay.
Ny fomba voalohany dia azo atao amin'ny fanokafana terminal ary fanatanterahana:
Manafatra indray ny lakilem-bahoaka izahay:
Y manavao izahay:
sudo apt upgrade-dist
Ny fomba faharoa dia mamafa ny tahiry, noho izany dia manokatra terminal izahay ary manatanteraka:
sudo rm -rf /apt/sources.list.d/spotify.list
Vahaolana amin'ny lesoka [drm: drm_atomic_helper_commit_cleanup_done]
Tsy dia fahita loatra io lesoka io ary matetika dia tsy miseho afa-tsy amin'ny vitsivitsy izy, ny antony mahatonga azy matetika dia tsy azo hatsangana tsara, ny solosaina sasany ihany no manana olana amin'ny fikirakirana fanombohana.
Mba hamahana izany dia tsy maintsy manokatra terminal isika ary manatanteraka:
Andao ho hitantsika ny andalana manaraka
Y hanampy izahay milomano mangina ny manaraka horonantsary = SVIDEO-1: d
Tehirizinay ny fanovana Ctrl + o ary mivoaka amin'ny nano Ctrl + x izahay.
Ny dingana manaraka dia ny fanavaozana ny fanovana Grub amin'ny:
Ary azontsika atao ny mamerina ny solosaina amin'ny:
Fampiharana atoro anao
Deepin teratany dia manana fampiharana be dia be izay tsy dia tsy ampy amin'ny zavatra maro.
aza tsy ny mpampiasa rehetra matetika no miombon-kevitra amin'ilay rindranasa natolotra antsika izany no antony ahafahantsika misafidy ny mametraka safidy hafa sy ireo fanampiny.
Ny rindranasa voalohany azontsika safidiana hosoloina dia ny tranokala fitetezana tranonkala, izay manolotra Chrome ho anay.
Tsy misy fisalasalana Chrome dia mpizaha tranonkala iray tena tsara, tena tsara izay tsy ahafahantsika mangataka be, saingy misy teboka ratsy kokoa ary ny fanjifana RAM be loatra.
Afaka misafidy ny iray lehibe amin'ireo mpifaninana aminy izay Firefox, izay azontsika apetraka miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Browser iray hafa izay mety ho safidy hafa ireto roa ireto raha tsy tianao dia Opera, izay amin'ny fomba fijerin'ny mpizara dia mpizaha tena tsara izay nampihatra endrika tena tsara tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Ho an'ny fametrahana anao ampy izay handehanantsika amin'ny tranokala ofisialiny ary ampidino ny fonosana deb izay azontsika apetraka aoriana amin'ny alàlan'ny tsindrio indroa fotsiny.
Fampiharana iray hafa azontsika apetraka ao amin'ny Deepin 15.6 dia Kodi. Ity fampiharana foibe fialamboly ity dia tsara ary afaka manampy anao hankafy ny atiny multimedia amin'ny fomba tsara tarehy tokoa.
Raha hametraka azy dia soraty fotsiny:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Inona no hatao aorian'ny fametrahana Deepin OS 15.6
OpenMandriva Lx 3 dia mahazo fanavaozana lehibe alohan'ny kinova lehibe manaraka
Deepin OS 15.6 torolàlana fametrahana